MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2011 » oktober
Xarunta bangiga keydka dhiiga oo cusbitaalka guud ee Hargeysa laga furay
Waxaa maanta magaalada Hargeysa laga furay xarun loogu talo galay in lagu kaydiyo dhiigga. Xaruntan bangiga keydka dhiigga oo ahayd, xarun aad iyo aad loogu baahnaa. Waana horumar wanaagsan oo u soo korodhay curbitaalka guud ee Hargeysa. Dawladda Somaliland ayaa ku hawlan in wax badan ka qabato cusbitaalka guud ee Hargeysa. Mar aan sidaa u […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Manager-kii shirkadda Apple oo u geeriyooday xanuunkii canserka Steve Jobs
Steve Jobs, waaka dharka madow gashan Waxaa xalay ku geeriyooday dalka Maraykanka (USA) Managerkii shirkadda caanka ah ee Apple, Steve Jobs. Sidii aynu maqaalkeenii bisihii ogos 28 kaga soo hadalnay xaaladiisa caafimaadeed ee Steve Jobs. Waxanu u geeriyooday cudurka dilaaga ah ee Kansarka, oo hayey muddo 7 sanno ah, laga soo bilaabo 2004. Cudurka Kanserka […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Bilada Nobel Prise ee caafimaadka oo maanta lagu dhawaaqay (Nobel Prize in medicine)
Maanta oo ay taariikhdu tahay 3 Bisha Oktober 2011, ayaa lagu dhawaaqay shakhsiyaadkii qaadan lahaa bilada qiimaha leh ee Nobel Price, qaybta Caafimaadka. Medicine. Waxaana sannad walba bixisa Jaamacadda caafimaadka ee Sweden, Karolinska Institutet ee ku taala xarunta dalka Sweden, Stockholm. Guddidan oo ka kooban khuburo iyo barafasooro ku xeel dheer cilmiga caafimaadka. Guddidan ayaa […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Gabadh 21 jir oo u dhalatay dalka Turkiga oo ilmo galeen cusub loo galiyey
Dhakhaatiirta dalak Turkiga ee xaga qaliinka, ayaa ku guulaystay markii ugu horeysay dunnida in ay galiyaan ilmo galeen cusub, gabdh da ´deedu tahay 21 jir. Ilmo galeenkan oo laga soo saaray gabadh dhimatay. Qaliinka oo ka dhacay dhakhtarka jaamacada Akdeniz oo ku taala gobolka Antalya ee dalka Turkiga. 11 sanno ka hor ayey ahayd markii […]